नयाँ शक्ति र जनयुद्धको नाता | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home बिचार नयाँ शक्ति र जनयुद्धको नाता
नयाँ शक्ति र जनयुद्धको नाता
निर्मल भट्टराई आज सम्म एनेकपा (माओबादी) लगायतका बिभिन्न माओबादी घटकले १० बर्षे जनयुद्धको समीक्षा गरेको कुनै दस्तावेज बाहिर आएको छैन । कुनै बेला चकनाचूर भएर फुटेका र अहिले टुक्राटाक्री जम्मा भएर बनेको नेकपा(माओवादी) केन्द्रले माओवादी जनयुद्धकै निरन्तरताको तानाबाना बुनिरहन्छ कि संविधान बमोजिम संसदीय चुनाब लड््छ हेर्न बाँकी छ । चुनावको तयारीका लागिमात्र त माओवादी सिद्धान्त सान्दर्भिक नै छैन । यो त युद्ध लडेर सत्ता कब्जा गर्ने विज्ञान हो । युद्ध मोह अझै कायम भएर हो या अरु कारण हो, सबै माओवादी भङ्गालाहरुमा कार्यरत विगतमा युद्ध लडेका सबै मानिसको मुखबाट निस्कने साझा एउटै शब्दावली छ – महान जनयुद्ध । कसैले त्यसको कमि कमजोरी देखायो भने त्यो क्रान्ति विरोधी तत्वको रुपमा चित्रित हुन्छ । आफूलाई द्वन्दवादी भन्नेहरुको यो बुझाई नै टीठलाग्दो छ ।
साच्चिकै संसदीय चुनाब लड्ने हो भने एकदिन तिनीहरुले जनयुद्धको निर्मम समीक्षा गर्नै पर्छ । जनता त्यसको प्रतीक्षामा छन । केवल “महान जनयुद्ध”भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेरमात्र पुग्दैन । नौलो जनवादी सपनाबाट ब्युँझेर जनयुद्धको नाममा भएका कतिपय ज्याजतीहरुप्रति संस्थागत आत्माआलोचना गर्नै पर्दछ । नयाँ शक्ति नेपालका सर्वस्वीकार्य संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले त्यसको आफ्नो भागमा परे जति गुण या दोष भोग्न तयार रहेको बताई सकेका छन् । वास्तवमा नयाँ शक्ति न माओवादी जनयुद्धको जगमा बन्न लागेको शक्ति हो न यसले जनयुद्धको नकारात्मक स्वामित्व लिनु आवश्यक नै छ । हिजो युद्धमा माओवादीतर्फ वा सरकारी पक्षबाट लडेका तर हाल नयाँ शक्तिमा कुम जोडेर काम गरिरहेका अभियन्तामा आ–आफ्नो पक्षको संक्रमणकालीन ह्याङओभर कायम रहेको कुरालाई भने अस्वभाविक रुपमा लिनु आवश्यक छैन ।
हो, जनयुद्धले जनजागरण ल्यायो, शहरीकरणलाई तीव्रता दियो, तत्कालीन संसदबादी दलहरुलाई राजतन्त्र अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा उतार्यो । तर सबैलाई थाहा छ , हरेक युद्धले तलका तीन मध्ये एक परिणाम ल्याउछ ।
नेपाली माओबादी जनयुद्धले उल्लिखित कुनचाहिं परिणाम प्राप्त गर्यो त ? यसको गम्भीर समीक्षा नेपालको माओवादी आन्दोलनले गर्ने नै छ । साँचो कुरा त के हो भने लेनीन, स्तालिन वा माओकालीन एकदलीय साम्यवादी व्यवस्था स्थापना हेतु सञ्चालित जनयुद्ध डा.भट्टराईको कौशलता र आँटले गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएर अवतरण भयो । यहाँ अरु माओवादी नेताको युद्धमोह र डा.भट्टराईको लोकतन्त्र मोह झल्कन्छ । ईतिहासको तथ्यपरक समीक्षा र बर्तमानको यथार्थ विश्लेषण सबै राजनीतिक पार्टीहरुले गर्नै पर्छ ।
१० माओवादी घटकको एकता सभामा “नयाँ जनवादी सारतत्व सहितको पूँजीवादी जनवादी व्यवस्थाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादतिर जाने” भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा सुनाईयो । नेपाली सामाजको चरित्रमा आएको फेरबदलको कारण अबको नेपालमा नौलो जनवादी क्रान्तिको न आवश्यकता छ न सान्दर्भिकता नै । नेपालको धरातलीय यथार्थ नौलो जनबादी क्रान्तिको लागि अब उपयुक्त छैन । यसो भन्न सकिन्छ, जतिसुकै मजबुत डोरीले नौलो जनवादलाई चीनबाट नेपालमा तान्न प्रयत्न गरिए पनि सगरमाथाबाट त्यो यता ओर्लन सकेन । र, भविष्यमा ओर्लने संभावना पनि छैन । तर माओबादीहरुले अझै नौलो जनवादी कार्यक्रमको बखान गर्न नछोड्नु र लगभग एक शताब्दी अगाडिको माओको आँखाले बर्तमान नेपाली समाजलाई हेर्नु उनीहरुको बैचारिक दिवालीयपन सिवाय केही होइन ।
अझ संसदीय चुनाव लडेर नौलो जनवाद ल्याईन्छ भन्नु, सबै वादका भारी विसाएर प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित मास पार्टी बनाउन अहोरात्र खटिरहेका डा. भट्टराई पुःन माओवादी पार्टी मै फर्कन्छन् भन्ने कल्पना गर्नु आकाश चाटेर अघाउछु भन्नु जस्तै हो । वैचारिक हिसावले, सांगठानिक संरचनाको हिसाबले तात्कालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यको हिसाबले नयाँ शक्ति नेपाल माओवादीसंग मेल खाने शक्ति हुदै होईन । कहाँको माओ कालीन दृष्टिकोण कहाँको २१औं शताब्दीको सम्मुन्नत दृष्टिकोण । त्यस्तै माओवादी जनयुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,वर्तमान संविधान, नेपालको कूटनीतिजस्ता विषयमा यो पार्टीको विल्कुल फरक धारणा बनिसकेको छ । प्रथम महाधिवेशन अगाडिका छलफल र बहसले यसलाई अझ समृद्ध बनाउने छ ।
बुद्धका वचन मानव जीवनका लागि मार्ग निर्देशक
असिना पानीले मकै र केराखेती सखाप
शुक्रवार हल्का नीलो वा सेतो कपडा लगाउँदा अत्यन्तै शुभ मानिन्छ।
पर्यटनमा विगतका सम्झौता कार्यान्वयनबारे छलफल हुने
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कुन बार जन्मिने मानिसको स्वभाव कस्तो ?
पर्समा यी चिज राख्नुहोस् पैसाको अभाव कहिल्यै हुँदैन
साढे सातको दशा, यी राशि हुनेलाई २०१८ मा
माघे संक्रान्तिमा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ति, नत्र ! हुन सक्छ अनिष्ट